Freelance ပရောဂျက်များဖြင့် သင်ရဲ့ Portfolio ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ? [Part 1]
Portfolio တစ်ခုကိုကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းဟာ မိမိ၏ Work Experience နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တွေကို ပြသရန်အတွက် အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ရွေးချယ်စရာ Human Resource တွေများပြားလာတာနှင့်အမျှ မိမိ၏လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အလွယ်တကူ သိနိုင်အောင် ပြသထားဖို့ လည်း လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိမိရဲ့ Portfolio ကိုပြင်ဖို့ အချိန်မရတာမျိုး၊ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Client တွေကတော့ သူတို့အတွက် သင်ဘာလုပ်ပေး နိုင်လဲဆိုတာကို သိချင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ Portfolio ဟာ သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာဖော်ပြပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးသော သက်သေတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Portfolio တစ်ခု ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ပိုပြီးပြည့်စုံဖို့ အမြဲတမ်း ဖြည့်စွက်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုကျွန်တော်တို့ Freelance ပရောဂျက်တွေနဲ့အတူ ကောင်းမွန်တဲ့ Portfolio တစ်ခုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက် ရအောင်လားဗျာ။
♦️ Should I do free projects to stock my portfolio?
ယခုအချိန်အခါမှာ Project အနည်းငယ်ကို မိမိအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာတင် လုပ်ဖို့လွယ်ကူလာပါပြီ။ သင့်မှာ Client တစ်ယောက်မှ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေကို အခကြေးငွေ နည်းနည်းဖြင့် ကူညီပေးရင်း Project များ၊ အတွေ့အကြုံများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ကိုင်ရင်း သင့်ရဲ့ skills တွေလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး Project တွေမှာ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံရာတွင် မိမိအနေဖြင့် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိနိုင်သော်လည်း မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် သင့်တော်သောဈေးနှုန်းကိုတော့ တောင်းခံသင့် ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် Project တစ်ခုမှာ Client ဘက်မှ သင့်ရဲ့ အချိန်နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင် စွမ်းတွေကို အလေးနက်ထားသကဲ့သို့ သင်ဘက်မှလည်း အချိန်မှီ ပြီးစီးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်မှီခြင်းတွေ ကို ပြန်လည် အလေးနက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ အချိန်တိကျခြင်းနှင့် အရည်အသွေးကို တန်ဖိုးထားလာကြပါတယ်။ သင့် အနေဖြင့် Project တစ်ခုကို သတ်မှတ်ချက်ထားသော အချိန်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ပြီးစီးအောင်လုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားလျှင် မဖြစ်မနေ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းက အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
♦️ How to find your first freelance clients
သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး clientကို ဘယ်လိုရှာမလဲ? သင့်ရဲ့အနီးအနား အသိုင်းအဝိုင်းက စတင်ဖို့အကောင်းဆုံး နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်အမြဲ ထိုင်နေကျ စားသောက်ဆိုင်တွေ (သို့) ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ Website ရှိရဲ့လား? အွန်လိုင်းကနေ စာရင်းတွေကို ထိန်းချုပ်သလား? စသည်ဖြင့် စုံစမ်းပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လွယ်ကူလွန်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုအချိန်မှာတော့ သင့်ရဲ့ Clientကို ရှာဖွေရာမှာအရမ်း လွယ်ကူသွားပါပြီ။ မြန်မာ Freelancer တွေအတွက် Chate Sat Freelancing Platform (www.chatesat.com) မှာ အခမဲ့ Register လုပ်ရုံဖြင့် သင့်ရဲ့ Client တွေကို စတင်ရှာဖွေနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
♦️ Get referrals from previous clients
ပထမဆုံး Client ဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ တစ်ခြားသူ များကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေလေ့ရှိတဲ့အတွက် မိမိပေးသော ဝန်ဆောင်မှုဟာ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်သလို လုပ်ကိုင်ရသော Projects များကို စနစ်တကျ တိကျမှန်ကန်စွာလည်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ Client ကိုလည်း မေးပါ မိမိရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ကျေနပ်ရဲ့လား? ဘာတွေလိုပါသလဲ? အကယ်၍ ကျေနပ်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် တစ်ခြားသူတွေဆီ မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆို သင့်ပါတယ်။ Email တွေပို့ပြီး ကြော်ငြာခြင်းထက် Word-of-mouth စနစ်ကပိုပြီး ထိရောက်စေပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှာ ဆိုရင် ပရောဂျက်တွေပြီးမြောက်တာနဲ့ နောက် Project တွေရရှိဖို့အတွက် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ Star Rating တွေ Review တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Part2ကိုနောက်တပတ်မှာ ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားပါမယ်နော်..
သင့်အတွက် Client တွေကို ရှာဖွေဖို့ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် “ချိတ်ဆက်”မှာ အခမဲ့ Register လုပ်ပြီး ပရောဂျက်တွေအများကြီး ရှာဖွေ နိုင်ပါတယ်။ Freelancer တိုင်းအတွက် Chate Sat Team မှ သင့်ကိုကူညီရန် အချိန်မရွေး ကြိုဆိုပါတယ်။